Izimbangela nokuthi ungayivimbela kanjani inja yakho ekulungeni umbhede | Izinja Umhlaba
Uyayibona inja yakho iluma umbhede wayo? Imvamisa izinja zethu zivame ukuluma konke okusendleleni yazo futhi phakathi kwalezo zinto zingathola umbhede wazo.
Esizibuza kona uma sibona inja yethu yenza lokhu kungani kwenzeka? Uma ufuna ukwazi ungaxazulula kanjani le nkinga yokuziphatha kwesilwane sakho, kufanele ufunde i-athikili elandelayo, lapho sizokusiza uqonde ukuthi kungani ikwenza nokuthi izoyeka kanjani ukukwenza.
1 Ungasabela kanjani kulokhu kuziphatha kwenja?
2 Kungani inja yami iluma izinto?
2.2 Veza ukukhungatheka kwakho
2.3 Ubuhlungu bamazinyo
2.4 Ngabe ulangazelele ukukulinda
2.6 Awusebenzisi amandla anele
3 Ngingayimisa kanjani inja yami ekuhlafuneni embhedeni wakho?
3.1 Ukusebenzisa umbhede kuphela lapho ukhona
3.2 Thola teethers
3.3 Imibhede engaqhekeki
3.4 Xhumana nothisha
Ungasabela kanjani kulokhu kuziphatha kwenja?
Ufika ekhaya ngemuva kokusebenza kosuku bese ubona izingcezu zombhede wenja yakho lapho ungena emnyango. Ufika esikhaleni lapho enombhede wakhe futhi lapho uluma ingxenye ebishiywe iphelele. Into yokuqala ozibuza yona kulesi simo ukuthi, kufanele ngenzeni lapho inja yami ikwenza lokhu?
Ukusabela kwakho kulokhu kuziphatha okungajwayelekile kwenja yakho kubalulekile. Impela into yokuqala efika engqondweni ukumjezisa noma ukumthethisa, kepha lokho akuyona into eyenza umehluko enjeni yakho, ongeke neze akuqonde ukuthi usabela njengokukhuza.
Into engenzeka kakhulu uma ujezisa inja yakho, ukuthi lokhu ube nokusabela okuphambene ngokuphelele nalokho obufuna ukukufeza futhi ukwenze kaninginingi. Kungakho into ebaluleke kakhulu, esikhundleni sokuphendula okwamanje lapho kwenzeka lokhu, ukubuyekeza ukuthi kungani isilwane sakho sisabela ngaleyo ndlela, ukuze sixazulule inkinga kusuka emazingeni aphansi.
Kungani inja yami iluma izinto?
Lokhu kuziphatha akuveli enjeni ubusuku bonke ngaphandle kwesizathu. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani engaliboni iqiniso lokuthi akufanele ahlafune izinto ezithile, kubandakanya nombhede wakhe uqobo. Ukulandela, sizokufundisa izizathu ezivame kakhulu isilwane sakho silume yonke into esendleleni yaso:
Inja ayizalwa yazi ukuthi yini engayenza nengakwazi ukuyenza ekhaya lakho futhi sihlala simangazwa isimilo salolu hlobo, lapho empeleni bekufanele sizibuze ukuthi ngabe sibanikeze yini imfundo edingekayo, ukuze bangenzi lezi zinhlobo zezenzo ezibhubhisayo. Phakathi kwamathuba akhona kungaba ukuthi inja icabanga ukuthi lo ngumdlalo.
Veza ukukhungatheka kwakho
Uma nganoma yisiphi isikhathi uke wamjezisa ngokunye noma utshelwe ngokungacabangi ngokuziphatha okuthile okungajwayelekile, inja yakho ingakwazi ukuhambisa lo muzwa wokukhungatheka Kule ndlela yokuziphatha okungahambi kahle uqala ukuluma phansi amakhushini, osofa, ngisho nombhede wakho uqobo. Kuyamangalisa ukuthi le nto ayenzayo futhi ekukhathaza kakhulu, imhlisa umoya kulowo muzwa wokukhungatheka abekade ehlangabezana nawo.
Ukugxila ikakhulukazi emidlwane, kufanele wazi ukuthi babhekana nezinto ezintsha umzuzwana ngamunye nokuthi indlela abaziphatha ngayo ingahluka futhi bangaziphatha ngezindlela ezingafani, ecabanga ukuthi konke kungumdlalo. Kepha kufanele wazi futhi ukuthi njengoba kwenzeka kithina siseyizingane, amazinyo abo akhula kancane futhi lokhu kungababangela ubuhlungu.
Ngabe ulangazelele ukukulinda
Inja yakho iyakwazi konke okwenzayo. Ujwayele ukukubona ufika udlule, silinde ukuphathwa, ukuthi sigcwalise ipuleti labo ngokudla noma ukuthi sidlala nabo. Isikhathi sokuya emsebenzini nokuba nenja yakho yodwa amahora ambalwa simfaka ethubeni lokuphelelwa ithemba lokungakuboni ngaleso sikhathi, okungaletha ukukhathazeka nesidingo sokukukhipha ngale ndlela yokuziphatha yokuluma cishe yonke into.
Okuthile okuphathelene nephuzu langaphambilini isithukuthezi sezinja, okuthile okungaholela kulolu hlobo lwenhlekelele nokunye okubi kakhulu. Isilwane sakho sasekhaya sidinga ukukhuthazwa njalo ukuze ungazizwa unesithukuthezi isikhathi eside. Uma kungekho lutho oluzungezile olukugqugquzela ngokwanele, uzothola leso sikhuthazo ekusebenziseni imihlathi namazinyo akho ukuklebhula noma yimuphi umbhede noma umqamelo oseduze.
Awusebenzisi amandla anele
Kunezinhlobo ezizolile kakhulu maqondana nokuzivocavoca umzimba, kepha ezinye ezidinga ngempela ukukhipha wonke amandla azo, maningi. Kunezinhlobo zezinja ezinqunyelwe ukuzingela, njenge- Borzoi, nabanye okudingeka bagijime futhi bagijime ngaphandle kokuma isikhathi eside, basebenzise amandla anele ukufika ekhaya bekhathele ngokwanele ukuthi baziphathe kahle ngaphakathi ekhaya labo.
Ngingayimisa kanjani inja yami ekuhlafuneni embhedeni wakho?
Sesizibukezile zonke izizathu zokuthi kungani inja yakho enhle iba "isilo sasendleLokho kuluma konke okungaphakathi kwendlu yakho. Isikhathi sokukwazi lokhu bese ucabanga ukuthi isisombululo esikhonjisiwe singaba yini ukuze ungabe usakwenza. Kunezinketho ezahlukahlukene ongazizama inja yakho ingasenakho lokhu kuziphatha futhi yilezi ezilandelayo:
Ukusebenzisa umbhede kuphela lapho ukhona
Esinye sezixazululo ezivame kakhulu esingazithola kule nkinga ukuthi, lapho uhamba, ususa umbhede osetshenziswa yinja yakho futhi uvame ukuhlafuna, ukuze ayisebenzise kuphela lapho ukhona futhi ungaphansi kweso lakho. Njengoba sikutshele ngaphambili, ukumthethisa nje ngeke kulethe imiphumela emihle, ngakho-ke uma umbona eluma umbhede wakhe, kufanele umvimbe futhi umnikeze ngokushesha into angakuluma, njengenye yamathoyizi akhe.
Into etholakala kuzo zonke izitolo zezilwane oya kuzo njalo ama-biters. Inja yakho ngeke iyeke ukufuna ukuhlafuna izinto, ngakho-ke kufanele ulume kuphela izinto ezifanele, ukuze ungazilumi izinto eziphulayo. Lezi teether zivame ukwenziwa ngezindwangu ezingazweli futhi ngalezi zinja zakho zizokhipha zonke izingqinamba azidingayo ukuze azidedele futhi ashiye umbhede wakhe yedwa.
Ingabe ikhona imibhede inja yami engakwazi ukuyiphula ngamazinyo ayo? Impendulo inguyebo, futhi uzobathola nasezitolo zezilwane ezinobungane. Lezi zenziwe ngezinto ezingavikeleki kakhulu ezizokwenza inja yakho isuse isifiso sokuluma ngaphandle kokubanga inkinga.
Uma konke lokhu okungenhla kungakhokhanga, kungcono uthinte uthisha ubuze ukuthi kanjani mfundise ukungalumi.
Lezi zonke izeluleko esingakunika zona ukuze inja yakho iyeke ukuluma Umbhede wakho. Khumbula njalo ukuthi ukuxhumana kakhulu nesilwane sakho kuzokukwenza usiqonde kangcono futhi kufinyelele ekuziphatheni okuhle kokuhlalisana okungcono.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Inja yami iluma umbhede wayo, izimbangela nokuthi ungakugwema kanjani
I-Yorkie poo noma i-yorkipoo